हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: दशैं आयो... धत्त पापी म त छुट्टै बसुला
सूर्य/सिकारु September 23, 2009 at 1:36 PM
लेख सन्दर्भिक छ हावा ब्रो । ल छुट्टै बसेपनी संगै बसेपनी मैले त भने है विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । यो बडा दशै सँगै तपाइको जीवन सुख शान्ती र सम्बृद्धिले झलमल्ल होस । मिसावट हुने हावामा स्वछन्दता आवोस ।
nepalikoaawaz September 23, 2009 at 2:43 PM
lau hawa bro daro gayo lekhchahi i like it reality chha tapaiko yo lekhma
Kishor September 23, 2009 at 7:15 PM
हावा ब्रो को लेख चाँही अरु भन्दा भिन्न रहेछ, राम्रो लाग्यो !
Basanta September 24, 2009 at 4:00 AM
कुरा ठिक हो हावा ब्रोको! पूँजीवादले आईमाई नंग्याएर र मान्छेको मति बंग्याएर बिगार गरेकै हो एक हदसम्म तर यसको उचित विकल्प के त? अहिलेसम्म देखिएको विकल्प 'कम पूँजीवाद भएको पूंजीवाद' नै हो, साम्यबाद च्यापेका देशहरु नसकेर त्यतै लागेका छन्।
दशैंको सामाजिक-पारिवारिक पक्ष साह्रै राम्रो हुँदा-हुँदै पनि अचेल बढ्दै गएको फजूल खर्च र ढोंग भने महारोगनै हुन्। हामी नेपालीमा मूल कूरामा पस्ने भन्दा पनि देखासिकी गर्ने बानी बढी छ।
हावा ब्रो र यो ब्लगका समस्त पाठकहरुमा दशैंको हार्दिक मंगलयमय शुभकामना!
हावा De Wind September 24, 2009 at 9:28 AM
धन्यवाद सुर्य ब्रो शुभकामना को लागि तपाईंको पनि सुख शन्ती को लागि हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु
धन्यवाद नेपाली को आवाज ब्रो रीअलिटी बाइट्स हैन...हाहाहा
किशोर ब्रो तपाईं ले पनि आफ्नो ब्लग मा कोक पेप्सी खानै नहुने अवस्थामा नेपालकै गुणस्तर कार्यालय ले धनगढी मा भेटेको समाचार पोस्ट गर्नु भाको छ कहिलेकाही नेपाली कर्मचारी ले पनि राम्रो काम पनि गर्दा रैछन् हगि
बसन्त ब्रो, मैले पनि मुनाफाखोर पूँजीवाद को बिकल्प साम्यवाद नै हो भनेको हैन... म सँग पनि रेडीमेड समाधान छैन.. तर पनि पुजीबाद मै पनि अचेल ब्याब्सायिक दायित्व वा कर्पोरेट रेस्पोसिबिलिटी भन्ने कुरा कुनै पनि ब्यबसाय को अभिन्न अङग हो भन्ने कुरा त जापान मा बस्नुहुने तपाईंलाई मैले भनिराख्नै पर्दैन होला
बसन्त ब्रो लगायत सबै साथी हरु मा मेरो पनि हार्दिक शुभकामना स्वीकार गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु.. साथै दसैं नमाने पनि मलाई पनि दशै लागेको हुनाले शायद तपाईंहरुको प्रत्रिकृया को जवाफ दिन केही ढिला हुनेछु..धन्यवाद
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा September 24, 2009 at 9:40 PM
… तर कोक बियर खाएर कुल र स्मार्ट देखिनुको साटो को पाखे भै राखोस मोही जुस खाएर …
khub man paryo bro..
BTW, HAPPY DASHAIN!
लेकाली October 1, 2009 at 9:21 PM
हावा ब्रोलाई यसपाली अली अपमान गरियो नि त। थाहा पाउनु भयो कि नाइ? दशै आयो शुभकामना पनि दिन सकिएन भलै शब्दमा सिमित होस्। किन दिन सकिन थाहा छ ब्रो यो हिन्दूहरुको महान चाड पर्‍यो रे र ठुला ठुला मिडियाहरुले यसरी नै प्रचार प्रसार गरे। मन अमिलो हुँदा हुँदै देखावटी शुभकामना दिन हृदयले माने त्यसैले थोरै भए पनि दुस्साहस गरे। सम्पूर्ण नेपालीहरुको महान चाड भनिदिएको भए शायद पहिलो शुभकामना मेरै पो हुने थियो कि? जे होस् तिहार आँगनीमा उक्लिदै छ अपमान गर्न नपरोस। अँ ब्रो धेरै दिन दशै मनाउन पाइन्न है कुनै खुराक नबाँडी खुसुक्क एक्लै बसिदिनु हामीलाई अपमान गरेको ठहरिने छ।
हावा De Wind October 5, 2009 at 10:10 AM
कृष्ण ब्रो, तेती गाली गर्दा पनि टेरेनन काठमाडौं का भेडाहरुले.. बिमल निभाले अस्तिको कान्तिपुर मा लेखेका छन एसपाली त बियर रक्सी को स्टक नै सकियो रे सप्तमी तिरै.. कत्तिले ब्लाक मा बियर किनेर खाए रे
Anonymous मित्र धन्यवाद सकारात्मक प्रतिकृया को लागि
लेकाली ब्रो, तपाईं को भावना असल हो तर कुरा सारो छ.. दशै हाम्रो चाड हैन थोपरिएको चाड हो भनेर कतिपय जनजातिहरु असन्तुस्ट छन.. तेस माथि नेपाल धर्म निरपेक्ष्य देश भएपछी दशै लाई राष्ट्रिय चाड भन्दा अरु धर्म मान्ने ले पनि अप्ठ्यारो महसूस गर्ने नै भए... अब हिन्दू नै भए पनि पहाडीया र मधेसी हरुको दशै मान्ने तरिका पनि फरक छ..तेसैगरी जनजाती भएपनी धेरैजसो नेवारहरु र अरुपनी धेरै जनजातिहरु दशै मान्छन
मैले हेर्दा पनि नेपाल मा दशै लाई धार्मिक भन्दा पनि सान्स्कृतिक रुपमा बढी मनाइन्छ र मनाउनु पर्छ..त्यै अर्थमा नै भुपी सेर्चन र नारान गोपाल दुबै जनजाती भएपनी "दसैंमा आशिक दिन पाइन भन्थे नि बाबैले..." भाकाको गीत लेखेका र गाएका हुनुपर्छ.. शायद दशै मा खास गरी सार्वजनिक मिडिया मा देवी देउता र कर्मकान्ड को चर्चा नगरेर भेटघाट, रमाइलो, र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एउटा सेकुलर चाड को रुपमा चर्चा गरे धेरै लाई सजिलो हुने थियो होला कि ?
तर मैले चाँही दसैं एस्पाली पनि मानिन् है ब्रो.. ब्यकिगत रुपमा मेरो लागि दशै एउटा बिक्रित परम्परा हो..प्रचन्ड ले त मेरै सिको गरेका न हुन